Wasaaradda arrimaha dibedda oo jaamacadda carabta ugu baaqday in faraha kala arrimaha Afrika - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Wasaaradda arrimaha dibedda oo jaamacadda carabta ugu baaqday in faraha kala arrimaha Afrika
On Jun 17, 2021 250
Addis Ababa,June 17, 2021 (Senee 10,2013 T.I (FBC/SOMALI)-Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ugu baaqdayJaamacadda Carabta in arrimaha Afrika loo daayo dadka Afrikaanka ah maaddaama webiga Niil uu yahay il-biyood Afrikaan ah.
Af-hayeenka Arimaha Dibada Dina Mufti ayaa warbixintiisii ​​todobaadlaha aheyd ee shalay waxa uu ku sheegay in caalamiyeynta arrinta biyo-xidheenka weyn ee Itoobiya (GERD) ay tahay dhaqanka caadiga ah ee Masar; laakiin Itoobiya weli diidantahay dhaqannadaas.
Dhankayaga, waxaan si adag u sheegnay in Itoobiya ay tahay isha iska leh webiga niilka buluuga ah.
Waxaan uga faa’iideysan karnaa wabiga si cadaalad ah oo sax ah anagoon cid kale wax yeeleynin, ”ayuu raaciyay.
Sida ay werisay wakaalada wararka ee Itoobiya (ENA), af-hayeenku wuxuu xusay in ay jiraan in ka badan 10 waddan oo ay maraan biyaha wabiga Niilku, balse Jaamacadda Carabtu waxay u soo bandhigaysaa Masar iyo Suudaan inay yihiin mulkiilayaasha biyaha ee keliyood.
Tani waa muujinta mowqifka cadaalad darrada ah ee Jaamacadda Carabta, ayuu hoosta ka xariiqay. Dina ayaa sidoo kale xusay, in“heshiiskii gumaysiga ee iska indhatiray inta badan waddammada wabiga Niilku maro maanta aanu noqonayn mid dhaqan gelin kara. Cidna ma aqbali doonto heshiis noocaas ah ee ku dhisan qarniga 21-aad. ”
Wuxuu shaaca ka qaaday in arrrinta wabiga Niil ay Itoobiya u tahay mid soo jireen ah, sababtoo ah, in ka badan 60 boqolkiiba dadkeennu wali waxay ku nool yihiin mugdi, horumarkuna sidoo kale waa arrin jiritaan maadaama ay u baahan yihiin tamar sidoo kale.
” Wadahadal iyo iskaashi ayaa ah wadada kaliya ee lagu xalin karo arrinta si xal waara looga gaadho, af-hayeenka ayaa carabka ku adkeeyay, isagoo intaa ku daray in dafiridda wadamada wabiga Niil ee usoo bandhigidda arrinta aanay xal keeninayn ilaa inta dhibaatadu ay ku koobantahay labada dal oo kaliya.
Intaa waxaa dheer, Niilku waa webi Afrikaan ah, Masarna waa dal Afrikaan ah oo xubin ka ah aasaaskii ururkii Qaramada Afrika ee xilligaas (OAU) ama Midowga Afrika ee hadda jira. Suudaan sidoo kale waxay xubin ka tahay Ururka Midowga Afrika (AU), ayuu xusay.
Dina wuxuu markale ku celiyay in “Niilku yahay Webi Afrikaan ah dhibaataduna sidoo kale ay tahay mid ka jirta gudaha Afrika.
Sidaa darteed, ma jirto sabab loo geeyo arrinta dalalka jaamacadda Carabta. Iyagu ha xalliyaan caqabadaha haysta waddamada Carabta oo arrimaha Afrika ha u daayaan dadka Afrikaanka ah. ”
Af-hayeen Dina Mufti oo arrimo badan kaga hadlay shirkiisii jaraa’id ee…
Dowladda Maraykanka oo walaac ka muujisay weerarrada ay kooxda TPLF ku beegsanayso…
Deegaanka Soomaalida oo iclaamiyay qorshe dhir-beerid ah oo halkudhig looga dhigay…
Maamulka magaalada Addis Ababa oo munaasibad sagootin ah u sameeyay dhalinyaro si…
Af-hayeen Dina Mufti oo arrimo badan kaga hadlay shirkiisii…
Dowladda Maraykanka oo walaac ka muujisay weerarrada ay…
Deegaanka Soomaalida oo iclaamiyay qorshe dhir-beerid ah oo…